Iingcebiso zokutyala imali kurhwebo lwangaphakathi | Ezezimali
Umsebenzi we-intraday yinto eqhutywa kwiseshoni enye yokuthengisa. Oko kukuthi, apho kuthengwa kwaye kuthengiswa iiodolo kwenziwa ngaphandle kokulinda omnye umhla ukuba ufike. Ukwenza olu hlobo lwemisebenzi kwiimarike ze-equity, ayilulo lonke ukhuseleko kwimarike yemasheya efanelekileyo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuphela ezinye ezibonelela ngeempawu ezithile. Njengomzekelo, ukuba ze ukuthengiswa okuphezulu kunye nokuguquguquka okuphezulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ngale ndlela kuphela, siya kuba kwimeko egqibeleleyo yokwenza ingeniso yethu ngexesha elifutshane kakhulu.
Oko kubizwa ngokuba yi-intraday yimisebenzi ephethe umngcipheko omkhulu kunenye. Kuba nayiphi na impazamo oyenzayo inokubiza imali eninzi ukusukela ngoku. Nokuba ulahleko olunzima kwingxelo yakho yengeniso ngaphandle kokuba utshintshe kwixesha lokuhlala. Nangona kule meko, ayisayi kuphinda ithathelwe ingqalelo njengothengiselwano lwangaphakathi okanye lwenziwe kwiseshoni enye yorhwebo. Kwelinye icala, enye into ekufuneka uyivavanyile ziiyure zeemarike zokulingana kunye nomhla wokugqibela wokufumana iiodolo zeseshoni enye zixhomekeke kubukho beseshoni ngaloo mini kwintengiso ekubhekiswa kuyo.
Oku kubaluleke kakhulu, kuba kungenjalo, ii-odolo ziya kuqhutywa kwiseshoni elandelayo. Kodwa inzuzo enkulu yokusebenza kunye neemarike zaseYurophu - ngokungafaniyo neMelika kunye neAsia- kukuba banazo iiyure ezifanayo zokuvula nokuvala njengeSpanish. Kuphela ngamaPhuthukezi ane-lag yeyure enye ngokubhekisele kwezethu. Ukongeza, zombini zinonxibelelwano oluzenzekelayo kwaye, kwelinye icala, zinekhalenda yokurhweba efana naleyo isetyenziswa kwiimarike zestokhwe zaseSpain. Lo mthetho-siseko awuthethi naluphi na utshintsho ngokubhekisele kwimikhwa yokwenza imisebenzi yokuthenga nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya.
1 Ngosuku lwangaphakathi: iimpawu zokhuseleko
2 Ungathengisa njani ngaphakathi?
3 Inzuzo encinci ekusebenzeni
4 Jonga iikhomishini zomthengisi
5 Iimveliso ezintsha engxoweni
Ngosuku lwangaphakathi: iimpawu zokhuseleko
Alithandabuzeki elokuba la maxabiso kwiimarike zesizwe okanye zamazwe aphesheya kufuneka Dibana nothotho lwezinto ezikhethekileyo ichazwe kakuhle. Phakathi kwabo, ukuhamba kwabo okukhulu ukuya kwelinye icala okanye kwelinye kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ukuya kwinqanaba lokuba iiyantlukwano zabo, kwezinye iimeko, zihlala zigqitha kwimida ye-5% okanye nangaphezulu. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba usebenze ngcono kakhulu ngala maxabiso ngamaxesha amafutshane. Nangona imbuyekezo, kunye nokwenza imisebenzi ibe yinzuzo, kuyimfuneko ukwenza igalelo lemali lifuna ngakumbi kunaleyo imiselwe ixesha eliphakathi okanye elide.
Kwelinye icala, olu didi lwamaxabiso akhethekileyo lubonakaliswa kukuthelekelela okukhulu. Ngamanye amagama, ukwenza imisebenzi ekhawulezileyo kwiimarike ze-equity. Apho, kwiiyure ezimbalwa okanye kwimizuzu onokuyenza Yenza intengiso ngenzuzo enkulu enkulu. Ngale ndlela, akukho mathandabuzo okuba ukhuseleko oluphezulu lwenkunzi alufezekisi ezi njongo ngokubonisa ukungazinzi okulawulekayo kwiseshoni nganye yorhwebo. Kwinto emiselweyo njengenye yezona mpawu zixhaphakileyo kumaxabiso esitokhwe asebenza ukwenza imisebenzi kwiseshoni enye yokuthengisa. Ngokubanzi ngenqanaba lokuhlawula amatyala ngaphantsi kwezindululo zotyalo-mali ezikhoyo kwimarike zezabelo.
Ungathengisa njani ngaphakathi?
Ukwenza ezi ntshukumo kwimarike yemasheya, kuya kufuneka kusekwe iqhinga elikhethekileyo lotyalo-mali, elibaluleke kakhulu ekulungelelaniseni ukungena kunye nokuphuma kwamaxabiso kwiimarike zezabelo kakuhle. Ngaphandle kwezinye izinto eziqwalaselweyo zobuchwephesha kwaye mhlawumbi kude kube kwinqanaba lokujonga izinto ezisisiseko. Ngelixa kwelinye icala, akufuneki silibale ngeli xesha ukuba la maxabiso asebenza kwiseshoni enye yorhwebo nawo ahlukile icandelo layo eliphezulu lokuphila ngalo mzuzu. Kuba, enyanisweni, basesichengeni sokulandela imeko echaziweyo yentengiso yesitokhwe. Zombini ngokwe-bullish yangoku kunye ne-bearish yangoku. Yiyo loo nto ingozi enkulu ekusebenzeni kwabo.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nalo mba esijongana nawo kweli nqaku lelo linento yokwenza nokusasazwa kwesahlulo. Kungenxa yokuba olunye lweempawu zenkampani yile Akukho tyala abawunikayo lo mvuzo kwizabelo. Liqhinga elincinci onokulisebenzisa ukubonisa ukuba zeziphi iinkampani ezidwelisiweyo ezibonelela ngolu hlobo lwesicwangciso esiza kusetyenziswa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ukusukela ngoku. Azidibaniswanga, ngamafutshane, kolu hlobo lokuhlawula okanye lokuhlawula rhoqo.
Inzuzo encinci ekusebenzeni
Ewe, kwaye abatyali zimali abancinci nabaphakathi banokucinga, iinzuzo ekusebenzeni kwiimarike zezemali banqunyelwe ngakumbi. Oku kuqhelekileyo kuba izabelo zorhwebo ngexesha elifutshane. Kwiimeko ezininzi, kuphela kwiiyure ezimbalwa, nangaphandle kokufikelela kula manqanaba ngokukhawuleza ekwenzeni imiyalelo yokuthengisa. Le yimisebenzi apho, emva kwayo yonke loo nto, eyona nto ibalulekileyo kukuba ihlawulwe kwizikhundla ezilungileyo. Eminye ayibalulekanga kangako kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kungenxa yokuba into emalunga nayo kukuba imali yethu yemali inyuka kancinci kancinci kwaye ukuba kunokwenzeka ngakwimisebenzi eliqela kuyo yonke inyanga. Yeyona ndlela kuphela yokulinganisa iakhawunti yethu yokonga bonisa imali eseleyo eyonelisayo qho ngenyanga. Nangona le ntsebenzo ingafezekiswa ngalo lonke ixesha. Akukho ngaphantsi kakhulu, njengoko unokuqonda ukuba usebenze ngolu hlobo lotyalo-mali kutyalo-mali. Akumangalisi ukuba, into onokuyifumana kurhwebo kwiimarike ze-equity ibalwe ngaphezulu kakhulu kunexabiso lenzuzo ngokwayo. Ebonisa ukuba ngaba kucacile ukuba yeyiphi inkuthazo yokwenyani kolu didi lweentshukumo ezinobuntu kwiimarike zezabelo, nokuba zezesizwe okanye ezingaphandle kwemida yethu.
Jonga iikhomishini zomthengisi
Los okanye abarhwebi Faka isibonelelo serhafu ejolise kuyo nayiphi na iprofayili yomtyali mali kukhuphiswano naleyo ibonelelwa ziibhanki kunye neebhanki zokonga, nangona oku kufuneka uvule i-akhawunti yezokhuseleko kwaye, kwiimeko ezininzi iboniswa izibonelelo ezibalulekileyo kubabhalisi bakho. Ngapha koko, eyona ndlela ilungileyo ukuthatha ithuba lokubonelelwa kwesitokhwe Ayisiyo ngokuqesha ezona zibalulekileyo okanye ezo zinika ezona ziphulelo, kodwa kungcono ziye kwezo zihambelana neprofayili yethu njengomtyali mali.
Aba bathetheli bezezimali baqalisa amaqondo anobundlongondlongo ngakumbi kunalawo aqhutywa ziibhanki kunye neebhanki zokonga, ezibandakanya iibhonasi, amaxabiso asicaba, amaxabiso okusebenza okubizwa ngokuba yi-intraday nolunye uthotho unikezela ukurhweba kwikamva kunye nakwiziphumo. Okwangoku kukho ukuguquguquka okukhulu kumaxabiso kwaye ngokolu luvo sinokukhetha amaxabiso athile anokuhlelwa njengokhuphiswano olukhulu kwicandelo lotyalo-mali. Into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo ivelise umthombo omtsha wokonga kwiiakhawunti zethu zobuqu kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Iimveliso ezintsha engxoweni
Enye yeemveliso ezithengiswa ngenani elikhulu lokhuseleko kunye neenkampani zotshintshiselwano ziiakhawunti zeengxowa-mali ezikhoyo yenzelwe abatyali mali abatyala imali ikakhulu kwiingxowa mali kwaye ayifuni iikowuti zexesha lokwenyani kwintengiso yesitokhwe. Ikuvumela ukuba utyale imali kolu hlobo lwemveliso ngohlobo olukhethiweyo lwabaphathi abadumileyo bamanye amazwe, ukongeza ekusebenzeni kwimarike yemasheya yaseSpain nakwezona ndawo ziphambili zokutshintshiselana.
Phakathi kwezibonelelo eziphambili zokuqesha enye yezi akhawunti kukufumana iingxelo zenyanga zolawulo lwemali yakho ezilungiselelwe ngumphathi ngokwakhe, inkqubo yokucebisa simahla kwezokhuseleko, ukufikelela kuhlalutyo olusisiseko kunye nokugcinwa simahla kwexesha elichaziweyo kubathengi abatsha. Kungenxa yokuba ekupheleni kosuku into emalunga nayo kukwenza ukuba ukonga kube yinzuzo ngaphezulu kwezinye izinto ezigwenxa. Ngayiphi na imeko, kufuneka kukhunjulwe ukuba imisebenzi eqhutywa kwiseshoni enye yokuthengisa inemingcipheko emininzi kunaleyo inamaxesha amade.
Apho eyona nto ibaluleke kakhulu kukushiya i-euro enye endleleni. Ukuze kancinci kancinci sikwazi ukwenza ingxowa yokonga ehlangabezana nolindelo lwethu njengabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona, ngelishwa, ingeyiyo yonke imisebenzi esiya kuyifikelela kwesi siphelo enqweneleka kakhulu kubo bonke abathengisi. Akumangalisi ukuba yenye yeenjongo ekufuneka sizibekele zona xa siqala iintshukumo kwiimarike zezabelo. Nokuba silisebenzisa ngantoni na icebo lotyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Iingcebiso zokutyala imali kurhwebo lwangaphakathi